Umaki: ukwakhiwa kwe-imeyili | Martech Zone
Maka: ukwakheka kwe-imeyili
Kunesizathu sokuthi izinkampani eziningi zihlela ukusebenzisa isikhathi esiningi nemali ekukhangiseni nge-imeyili ngo-2016: ukumaketha nge-imeyili kuyaqhubeka nokubamba i-ROI ephezulu kunazo zonke iziteshi zokumaketha ezidijithali. Bonke abathengisi banabanikezeli babo bezinsizakalo ze-imeyili kanye nohlu lokuhlola lokuthuthukiswa kwe-imeyili. Kepha kaningi kakhulu abawunaki umgqigqo womkhankaso: ukuhlola i-imeyili yabo kumadivayisi amaningi namakhasimende ngaphambi kokusetha umkhankaso ozowusebenzisa. Yize imikhankaso eminingi yokuhlola ngokuthumela i-imeyili
Kuya ngokuthi ubuza kubani, i-imeyili ibilokhu ikhona phakathi kweminyaka engama-30 nengama-40. Inani laso lisobala, ngezinhlelo zokusebenza ezihlanganisa zombili izici zenhlalo nezobuchwepheshe. Okubuye kubonakale, nokho, ukuthi ubuchwepheshe be-imeyili obuphelelwe yisikhathi bunjani ngempela. Ngezindlela eziningi, i-imeyili isakhiwa kabusha ukuze ihlale ihambisana nezidingo ezikhulayo zabasebenzisi banamuhla. Kepha uvama kangaki ukubamba okuthile ngaphambi kokuvuma ukuthi mhlawumbe isikhathi sesidlulile?